ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောကြား
I'm sympethise your will. But , Present KIA/O are not the native Kachin people like you, but from China Communist Bureaucratics. Even Amay Su come into Kachin peace process, they won't accept Amay Su's proposals, but follow the comments from China.
ဘိဒ်ထန် နေရပ်- ကိုရီးယား :
ဖြေးဖြေးလုပ်တဲ.အလုပ်ဆိုတာရှိတယ်။ လတ်တလော လုပ်တဲ.အလုပ်ဆိုတာလည်းထိုနည်းတူရှိတယ် ။မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေ အားကိုးတဲ. အမေစုရယ်။ အမေရဲ.စကား တခွန်းကြောင်. ကချင်ပြည်နယ်ရဲ.သွေးတွေတိတ်နိုင်တဲ.POWER တွေရှိပါတယ်။ ဗမာပြည်သူတွေသွေးထွက်တဲ.အရေးမဟုတ်တဲ.အတွက်ကြောင်.လား ကချင်ပြည်သူတွေလည်း ပြည်ထောင်စုသားတွေပါ ။သွေးတွေယိုစီးနေတဲ. ကချင်အရေးကို ဦးစားပေးစေချင်တယ် အမေရယ်။ ကျန်တာနောက်မှာလုပ်လို.ရတယ် စာနာပေးမယ်လို. မျှော်လင်.ပါတယ်အမေ
Amay Suu, really appreciated that you go to Mone and Kyaukkyi. I am from Mone and I was NLD youth leader during 1990 campaigning. I am now in overseas and very glad to see you went all the way to my hometown. I hope one day I can meet you again.